कीर्तिपुर सन्देश साप्ताहिक: निर्वाचन क्षेत्र
काठमाडौंको १० वटा निर्वाचन क्षेत्र मध्ये १० नं. मा परेको यो कीर्तिपुर नगर अव कुन क्षेत्रमा पर्ने हो कुनै यकिन भएको छैन । नेपालको कूल जनसंख्यामध्ये एकलाख सत्र हजार जनसंख्या बराबर एकजना सभासद बनाउन सर्वाेच्च अदालतले नै आदेश जारी भए पछि दलहरु अव निर्वाचन क्षेत्र निर्धाधरण तिर ध्यान केन्द्रित भएको छ । २०४६ सालको संयुक्त जनआन्दोलनपछि प्राप्त बहुदलिय व्यवस्थाको शुरुमा यो क्षेत्र पाँच थियो जस्मा तत्कालिन नेकपा मालेका महासचिव जननेता मदन भण्डारीले अत्याधिक मत ल्याइ निर्वाचित भएको थियो ।
मदन भण्डारीको असमायिक दुर्घटना भनौं या हत्यापछि यस क्षेत्रबाट नेकपा एमालेका नेता कृष्णगोपाल श्रेष्ठले उप निर्वाचनमा विजय हासिल गरेको थियो र पछिल्लो समयमा यो यो क्षेत्र ७ नं. निर्वाचन क्षेत्र हुन पुग्यो र उक्त क्षेत्रमा पनि कृष्णगोपाल श्रेष्ठले नै विजय हात पारेको थियो । २०५४ सालमा नेकपा एमाले विधिवत विभाजनपछि यस क्षेत्रमा नेपाली काँग्रेसका नेता तीर्थराम डंगोल संसद हुन सफल भयो । २०६२÷०६३ को लोकतान्त्रिक आन्दोलन सफल भएपछि यो क्षेत्र नं १० हुन पुग्यो । जस्मा नेकपा एमाओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले अत्याधिक मत ल्याई विजय भएका थिए । त्यसैले अव काठमाडौंमा फेरि ५ वटा क्षेत्र थप्ने भएको छ जस अनुसार सायद यो क्षेत्र १५ हुने भएको छ । हामी एक पछि अर्काे गरी क्षेत्रमा प्रमोशन हुदैछौ अथवा हामीले जननेता मदन भण्डारी, एमालेको नेता कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, नेपाली काँग्रेसका नेता तीर्थराम डंगोल, अन्तिममा एनेकपा माओवादीको अध्यक्ष प्रचण्डलाई पनि जिताइ पठायौं तर अव भने स्थानीय जनताकै प्रतिनिधि चाहियो भनेर सोच्न थालेको छ । कसैले त बल्ल घैटामा घाम लाग्यो भनेर भन्न थालेको छ ।
अव मेरो मतदाता नामावली कुन क्षेत्रमा पर्ने हो वा मेरो वडा कुन क्षेत्रमा गाभिने हो वा मेरो नगर कुन क्षेत्रमा समावेश हुने हो वा मेरो १० नं. क्षेत्रलाई कुन कुन क्षेत्रमा लग्ने हो । त्यसको कुनै यकिन भएको छैन । एमालेले आफनो सभासद कसरी जितिन्छ वा नेपाली काँग्रेसले यो क्षेत्र कसरी जित्न सकिन्छ वा एमाओवादीले कसरी जित्न सकिन्छ भनेर क्षेत्रलाई टुक्रा टुक्रा पारी चिरफार गरिदैंछ । सुन्नमा आएको छ अबको निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा कीर्तिपुर नगरपालिकामा विभाजन गरी दुईटा निर्वाचन क्षेत्रमा पार्न लागेको छ । वढा नं. १,२,३,७,८ र १९ लाई सतुंगल क्षेत्रतिर र बाँकि वडालाई चाल्नाखेल तिर राख्न लागेको छ । हेरौं अव काठमाडौंमा १५ जना सभासद बन्ने भयो कति स्थानीय नेता हुन्छन् त कति ठूला नेताको नाउँमा काठमाडौंमा डाडागीरी मचाउछन् हेर्न बाकी छ ।